पार्टी एकीकरण गरिहाल ! « Loktantrapost
पार्टी एकीकरण गरिहाल !
१५ पुष २०७४, शनिबार १४:५६
अरु दलहरुलाई मात्र होइन एमाले र माओवादी पार्टीका कार्यकर्ताहरुलाई पनि चकित पार्दै राजनीतिक जगत्मा अचम्मका छाल उराल्दै एमाले र माओवादी केन्द्रले अहिले गठबन्धन गरेर चुनाव लड्ने, एउटै घोषणापत्र जारी गर्ने र निर्वाचनपछि पार्टी एकीकरण गर्ने घोषणा गरेकै हो । दशैंको व्यस्तताभित्र कसैलाई कुनै सुराकै नदिई गरिएको यो घोषणा वारे पत्रकारको जिज्ञासाको उत्तरमा नेताहरुले भनेकै पनि हो– ‘यो यदि सबैतिर थाहा दिँदै गरिएको भए यस नतिजामा पुग्न रोक्ने शक्तिले अनेक व्यवधान निकालिदिन सक्थे, भाँजो हाल्न सक्थे ! हाम्रो गठबन्धन नहुन सक्थ्यो ! त्यसकारण यसलाई वडो होसियारी पूर्वक भित्रभित्रै गरिएको हो । यस वारे एमाले र माओवादी केन्द्र बिच छलफल धेरै पहिलेदेखि हुँदै आएको हो ।’
संयुक्त घोषणापत्र जारी भयो । मेचीदेखि महाकालीसम्म मिलेर गठबन्धनले उम्मेदवारी दिए । दुई–एक स्थानमा बागी उम्मेदवार उठ्न खोजे पनि । कम्नीस्ट पार्टीभित्र कदाचित अनुशासन उल्लङ्घन सह्य नहुने बुझेका कार्यकर्ताले आखिर पार्टीको निर्देशन पालना गरे । देशैभरिका वामपक्षधर कार्यकर्ता, समर्थक, शुभेच्छुकमा अपार खुसी छायो, उत्साह पलायो, जाँगर चल्यो । एकादुई निकृष्ट चरित्रका, दलाल प्रवृत्तिका व्यक्तिले चुनाव जित्नेबाहेक समग्रमा यस चुनावमा जनताको जित भयो । मैले अघिल्लो हप्ताको लेखमार्फत नै यी विचारवान् जनतालाई सलाम व्यक्त गरिसकेको छु ।
मत गणना सकिएको छ । नतिजा जगजाहेर भैसकेको छ । लोकतन्त्रको अर्तीबुद्धि दिई टोपल्ने बुर्जुवाका कतिपय संस्थामा कतिसम्म थेत्तरोपन हुन्छ ! मत गणना सकिएको १५ दिन हुन लागे पनि कुन दलले समानुपातिकमा कति सिट पायो नतिजा आएको छैन । जेहोस् ! पूर्वका गाउँघरमा एउटा उखान प्रचलित छ, ‘केजाति आएपछि केजातिले थाम्दैन’ भन्ने । जति नै दल्याइँ गरे पनि, जति थेत्तरो भए पनि, जति लबरचट्टु भए पनि अब वाम गठबन्धनका लागि कुर्सी खालि नगरी धर छैन ।
तर, अहिले वाम गठबन्धनलाई जिताउने मतदाताहरु अर्को पिरलोमा छन् । निर्वाचनपछि पार्टी एकीकरण गर्छौं भनेका दलहरु कतै कुनै दुश्चव्रmमा परेर फेरि आआफ्नो ताउलो तताउन थाल्ने हुन् कि ? कतै कुनै दम्भ चढेर भुइँमा न भाँडामा हुँदै जनतासँगका वाचा बिर्सने हुन् कि ? वडो चिन्तामा पिल्सिएका छन् । माथि ठुलाठुला नेताहरुमा कतिको पिरलो छ या के छ ? तर चिन्ता त तल मतदाताहरुमा छ । पत्रिकाले लेख्छ– “एमालेले फोरमलाई लिएर सरकार बनाउन सक्छ ! त्यसकारण उपेन्द्र यादव बालकोटमा बोलाइए !” यता मतदाताको मुटु ढुक्ढुक् गर्छ । फेरि पत्रिकाले लेख्छ– “शेर बहादुरले प्रचण्डलाई बालुवाटार बोलाएर भने– “तपाईं प्रधानमन्त्री भएर ५ वर्ष ढुक्कले चलाउनु होस् ! म मधेशवादी दलहरु मिलाएर बहुमत पु¥याइदिन्छु !” यता मतदाताहरुको पेटमा साँप पसिहाल्छ । चुनावताकाकै हुनु पर्छ एउटा भिडियो भाइरल भएको थियो, शेर बहादुर एकदम जङ्गिँदै भाषण गर्दै थिए– ‘… केपि ओली अब नेपालमा कहिल्यै प्रधानमन्त्री हुन सक्तैन ! म उसलाई प्रधानमन्त्री हुन दिन्न ! दिन्नँ ! दिन्नँ !! दिन्नँ !!!’ यो कुरा सम्झेर चिन्तित हुन्छन् मतदाता ।
उता राजपाका महासचिव मनिष सुमन भन्छन्– “ओली होइन, देशका लागि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनु बेस हो ! अझ यो देशको हितमा, लोकतन्त्रको हितमा कुरा गर्ने हो भने, यो वामगठबन्धन ठिक छैन, अब यो फुट्नुपर्छ, फुटिहाल्नु पर्छ ! यो सुन्दा पढ्दा यता मतदातालाई ‘मुखमा हान्नुजस्तो’ भैहाल्छ । नेपाली काङ्ग्रेसका नेता, विद्वान प्रदीप गिरी भन्छन्– “प्रचण्डको चमत्कारिक शैली छ, उहाँ एकतामा जानुहुन्न । एकतामा गैहाल्नु भयो भने पनि ४० प्रतिशत लिएर चाँडै छुट्टिनु हुन्छ !” यता मतदाता दारा किट्न थालि हाल्छन् । आखिर ‘मतदाता’ त मतदाता न हुन् । उनीहरु सरल छन्, कुरा छिटो पत्याउँछन् । हो, हुन त ओली र प्रचण्डकै कुरा अलिक बढी पत्याउँछन्, अरुको कुरामा बढी शङ्का गर्छन् तर अहिले अलिक उनीहरु नबोलेको बेला परेकाले होला ।
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चितवन गएर आफ्ना मतदाताहरुको बधाइ थाप्तै, मतदाताहलाई धन्यवाद दिँदै ३ दिन बिताउनु भयो । पार्टी एकीकरण भएको सुन्न हतारिएका मतदातालाई यो प्रतीक्षामा पार्दा दिक्क लाग्ने नै भयो । अझ हाम्रा च्याउसरी सञ्चार माध्यमले, भनौं एक दर्जन टिभी र एफएमले एकएक पल्ट भन्दा पनि बार पल्ट त्यही समाचार स्रोताले सुन्छन् । त्यसमाथि पत्रकारले अलिकति मसला भरेर, अलिक कुन शब्दलाई कहाँ कता जोर दिएर भनिदिन्छन् समाचार । अनि सधैं अघुल्टोको प्रहार खाइरहेका विचरा जनतालाई यस्ता बिजुली चम्काइले त्रसित पार्ने नै भयो नि ! फेरि प्रचण्डकै भनाइ भनेर प्रधानमन्त्री आधाआधा र आलोपालोको कुरा आयो । यो ‘५ वर्ष स्थीर सरकार’, भनेर ‘दुबै पार्टी एक हुने’ भनेर ढुक्क पारिएका जनतालाई किन परिपरिका कुरा सुनाएर पीडा दिएका होला ! पार्टी एकीकृत नै हुने भए यो ‘तँलाई आधि मलाई आधि चुक् तामा चुक् !’ किन गर्नु प¥यो नि !
जोहोस्, १२ गते साँझ केपी ओली र प्रचण्डको भेटघाट बालकोटमा सौहार्दपूर्ण भेट भएको र सरकार गठनअघि एकताको खाका तयार गर्ने सहमतीको सन्देश प्राप्त भएको छ । यसपछि शङ्कर पोखरेलको अन्तर्वार्ता पनि सुन्न पाइएको छ– “माओवादी र एमालेको सहकार्यमा कुनै समस्या नै छैन, त विकल्प किन खोज्ने ? अहिले एमालेले वामपन्थी गठबन्धन बाहेकको सरकारको कल्पनै गर्दैन !” अर्कातिर घनश्याम भुसाल अनलाई खवरलाई अन्तर्वार्ता दिँदै भन्छन्– “जनवादी व्रmान्तिको चरण हामीले पार ग¥यौं भनेर एमालेले नवौं महाधिवेशनले पुरै पास ग¥यो, त्यो भन्दा अलिक अगाडि माओवादी पार्टीले पनि हेटौंडा महाधिवेशनबाट त्यहीपास ग¥यो । आधारभूत रुपमा जनवादी व्रmान्ति पुरा भएको कुरा माओवादी केन्द्रले र हामीले पास गरिसक्यौं । त्यसैले अबका मुद्दामा वर्तमान र भविष्य हेर्ने मुद्दामा एमाले र माओवादीमा फरक छैन । एमाले र माओवादी एक हुने विधिवत सैद्धान्तिक आधार यही हो ।”
अझै पत्रकारबाट उहाँलाई थप प्रश्न थियो– “तपाईंले एमाले र माओवादीबिच सैद्धान्तिक भिन्नता छैन भने पनि कम्नीस्ट पार्टीका नेताहरु आफूलाई फरक देखाउन त निकै सिपालु हुन्छन् ?” जवाफ थियो– “तर, यो सन्दर्भमा सम्भव छैन । अब ओलीजीले उपेन्द्रलाई भेट्नुभो रे ! प्रचण्डजी चार–पाँच दिन चितवन जानु भो रे ! आदिइत्यादि भनेर जेजे कुराहरु निक्लिएको छ । अहिले पनि यसको सञ्चालनमा केहीनकेही समस्या छ । समस्या के छ भने यो मानौं दुईटाको मात्रै समस्या हो कि ? दुईटाले गरेपछि हुन्छ भन्ने खालको हो ? उहाँहरुलाई त्यस्तो लाग्ने र अरुले पनि त्यस्तो जिम्मा दिने हो भने सकिन्छ । … यो अब यस्ता कच्याक कुचुकले रोकिँदैन । किन भने यो एकता समयको माग हो । यो त अब अगाडि बढ्यो बढ्यो, यो त अब जनताको सम्पत्ति भइसक्यो ।”
यसरी प्रदीप ज्ञवालीका, शङ्कर पोखरेलका, घनश्याम भुसालका, नारायणकाजीका, जनार्दन शर्माका, कृष्ण बहादुर महराका कुरा सुन्दा अलिक आस्वस्त होइन्छ । तर अलिअलि कुनैकुनै नेताहरु बहुमत प्राप्त गरेपछि दम्भ बढेको जस्तो पनि गर्छन् । उता अस्तिचहिँ गठबन्धन गर्ने कुरा फैलियो भने भाँजो हालिन सक्छ भन्ने थाहा थियो नि त ! अहिले पनि एकता गर्न पनि भाँजो हालिन सक्छ भन्ने हेक्का त राखेकै होला ! अब हालिने भाँजोले कम बिगार गर्ने कदाचित होइन है ! त्यसकारण जताको सदिच्छा छ, नेताहरु ! छिटोभन्दा छिटो पार्टी एकीकरण गर ! इमान्दार र योग्य मान्छेहरुको टिम बनाएर सन्तुलित रुपमा सरकारमा जाने टिम तयार गर ! जनतालाई आस्वस्त पार ! भाँजो हाल्नेहरु हेरेको हे¥यै होऊन् !